Uyisebenzisa kanjani imiyalezo yeMiyalezo ngaphandle kokuvula usetyenziso kwiMac | Ndisuka mac
Siqinisekile ukuba uninzi lwenu alusebenzisi usetyenziso lweMiyalezo ye-Apple kwaye ngokuyinxalenye sisiphoso sezicelo zomntu wesithathu ezisetyenziswa ngumntu wonke namhlanje. Nokuba kunqabile ukuba ndiyisebenzise ngokwam le app ngaphandle kophuculo olwenziwe kwiinguqulelo ezintsha.
Ngayiphi na imeko, ukuba ungomnye wabo basebenzisa esi sicelo manqaphanqapha phakathi kwesangqa sakho sikufutshane, kungcono ukuba ufikelele ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kwisicelo, ke namhlanje siza kubona indlela yokuthumela kunye nokufumana imiyalezo ngaphandle kokuvula usetyenziso ngolu hlobo.
Nokuba kunjani, sinokhetho olufumanekayo ukwenza ukusetyenziswa kwesicelo kube lula kwaye sikhawuleze kwaye yiyo loo nto namhlanje sifuna ukwabelana nawe ngayo yonke indlela esingabandakanya ngayo iMessage (Imiyalezo) ngohlobo lwewijethi kunye nendlela yokuyisebenzisa thumela kwaye ufumane imiyalezo kwangoko ngaphandle kokufikelela kwisicelo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuba nesazisi se-Apple sisebenze kwi-Mac kwaye oku kwenziwa ngokuthe ngqo kwi Ukukhethwa kweNkqubo> IiAkhawunti. Senza iMiyalezo isebenze kwaye sigcwalise ifom ukuba asizukugqibezela ukuze idatha yethu ivele. Nje ukuba oku kugcwaliswe sinokukhetha kuphela inkonzo ngenombolo yethu yefowuni, kungcono ukuba singasebenzisi iiakhawunti ze-imeyile koku.
Ngoku singaya ngqo kwiziko lethu lolawulo kwaye sisebenzise iwijethi yoLuntu. Ukwenza oku siye ezantsi kweCC kwaye ucofe kuHlela. Iwijethi yoLuntu iya kuvela kwaye siklikha ngokulula +. Nje ukuba la manyathelo enziwe, singathumela kwaye sifumane imiyalezo ngendlela ekhawulezayo kwaye elula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyisebenzisa kanjani imiyalezo yeMiyalezo ngaphandle kokuvula usetyenziso kwi-Mac